Abaklami Czech indlela kuhle wemfanelo ukusetshenziswa izixazululo lobuchwepheshe ebonisa impumelelo emakethe. Lokhu ikakhulukazi kweqiniso we "Rapid" oyisibonelo, usephendukele ngezibuyekezo ngokwanele, restyling futhi facelift. Ngu-2015, imoto enyuka ifomu elungiselelwe ukusetshenziswa esisebenzayo ezingeke ukujabulisa connoisseur Russian European hatchback ezihlangene. Nokho, le nguqulo isigaba akulula ukuchaza - ezenziwe isakhiwo kanye nezinguquko okuye kwabangela ngayo izibalo zezikhalazo ezifakwe enqoleni umzimba. Ngesikhathi esifanayo, ngeke uhambe ngaphandle nje ngisahlose ezibukwayo, okuyinto namanje libhekene "Skoda Rapid" 2015. abanikazi Izibuyekezo uqinisekise lesi izinga futhi umkhuba: imoto iziphatha kahle imvelo enyinyekile ezisemadolobheni. Kodwa azigcini isithunzi inguqulo elandelayo Czech athengisa, ezinye zazo ziye atholwe ngenxa update lokugcina.
Imoto wathola isisekelo kusuka dlule zukulwane - kuyinto PQ25 yesikhulumi, okuyinto aluthola Skoda imoto yohlobo lweVolkswagen Polo. Okuxakayo nje izilinganiso izinto ezintsha idlule ubukhulu Igalofu, nakuba zokuqala ezimbili ezihlangene European organically yahlanganiswa, ubude nobubanzi. Noma kunjalo, ukuphambuka zamanje akubalulekile kangako, futhi inguqulo Czech kubhekwe njengento esikhundleni elikhanyayo uneso "German." Ngokuya izinga Ukugibela okuningi balondolozwa. Imodeli itholakala nge manual kanye othomathikhi 'amabhokisi. Mangisho ukuthi kokubili ongakhetha babe ehlonipheke kakhulu. Ngokwesibonelo, inguqulo "Skoda Rapid" umshini, ukubuyekezwa zazo zaqala ukuphawula ukuthi iloli njalo njengoba injalo manje ngu 6 izinyathelo cishe umfuziselo nokwethenjelwa. Lokhu kungenxa imizamo VW Group - Abaklami German baye elibuyekeziwe izingxenye ukudluliswa, ezisetshenziswa kuzo zonke ezingaphansi, kuhlanganise at Skoda. Kodwa lolu shintsho aziphelelanga lapho.
Ngokuphathelene usayizi jikelele imodeli platform, ngokwengxenye enkulu, ayizange ithuthuke. Nokho, ezinye izinguquko Kwenziwa Umklamo "Skoda Rapid", izici lobuchwepheshe zazo zimi kanje:
Imoto ububanzi - 170,6 cm.
Ubude - 448,3 cm.
Ukuphakama - 146,1 cm.
Ground imvume - 17 cm
platform ezinamasondo - 260,2 cm.
ithrekhi Front - 145,7 cm.
ithrekhi engemuva - 149,4 cm.
fuel tank umthamo - 55 wamalitha.
ifomu Lomgwaqo - 1150 kg.
Ekuklameni ukumiswa wazihlephula uhlelo Abaklami akazange ulinge futhi wasebenzisa ukucushwa bendabuko. Engemuva esetshenziswa sigubhu amabhuleki, futhi phambi - umoya disc izindlela. Njengoba for ukumiswa, ngaphambili waqaphela ezimele entwasahlobo design, kuyilapho ezingemuva - uhlelo semi ezimele.
Motor gamma Czech imodeli enwetshiwe kakhulu, kodwa njengendlela standard main motor likaphethiloli injini 1.6 amalitha. Empeleni, ezakhiweni yenjini wembula amahle "Skoda Rapid" 2015. Imininingwane zalesi sihlahla amandla kungenziwa elabekwa kanje:
Indawo - phambili.
Inqubo esetshenziswa nophethiloli - nophethiloli.
Volume - 1598 cm 3.
Nenshisekelo - singanikezwanga.
Amandla - 90 "amahhashi", okuhambelana 66 kW.
Amanani torque engu komkhawulo - 3800 rev / imiz.
Emqulwini Ukucushwa - ilandelana.
Inombolo amasilinda - 4.
Amaphayiphu e uMbhalo iyunithi - 4
Uhlelo okuphakela amandla ezalethwa umjovo basakaza.
Zibheke ekusebenziseni lawo mandla iyunithi kuvimbela ukuma kuyadida yemoto. Ukuze uthole i-European amandla ejwayelekile hatchback 90-eqinile kwanela. Futhi ngisho umongo Russian kuyinto izinga ehlonipheke kakhulu. Kodwa ungakhohlwa mayelana jikelele ukuma imoto "Skoda Rapid." Engine ukwenza imisebenzi yezokuthutha ku ukuthuthwa imithwalo ngisho encane kumele usazoba ezinamandla kakhudlwana. Nokho, kukhona emndenini futhi okukhethwa kukho 106 amalitha. a.
Kufanele ukuthi ukuphathwa kule imodeli ziyasetshenziswa kahle. Lokhu kusebenza umsebenzi namafutha, futhi izindlela isabele lokuxhaphaza amasondo ayo. Car sibhekane ngokuzithandela ematfuba, kugcina siqonde ngokuqiniseka, futhi ocucuzayo igesi akuveli e jerks okungazelelwe. Konke lokhu kubonakala e "ŠKODA Rapid" umshini Dynamics isici kubonakala kule ukusheshisa 11.4 imizuzwana kanye nesivinini phezulu 185 km / h. Nokho, ngisho ngenxa isithakazelo ukuze uzizamele lezi zilinganiso is hhayi Kunconywa. Nokho ukumiswa asakhelwanga ukushayela sporty, ikakhulukazi enamathela non-ekahle. Iqiniso lokuthi iyiphi ukuzwe kunikezwa gumbi ngokucijile kakhulu, ngokufundisa umshayeli a ukunyakaza kwenetha isitayela. Yiqiniso, ngokuyinhloko ezisemadolobheni abamba ukushisa hatchback, okuyinto party kunoma off-road - uma kungenjalo ngenakugwemeka kulungiswe.
Lapha kuzomele siphinde ingasaphathwa automatic transmission. Kuyinto maqondana idrayivu ashukumisayo sinezimfanelo uhlamvu yayo olandelanayo, bese iluma ngenhloso umshayeli ukuba ukugibela Frisky. Leli akulona Ergonomics plus, kodwa kwenza kube ngaphezulu engabizi ukulawula imoto "Skoda Rapid." Izimpawu petrol kuqinisekisiwe. Ngakho, emgwaqeni omkhulu imoto ibusa 4.6 amalitha, futhi imingcele edolobheni - 7.8 amalitha. Lena ukusebenza okuhle kakhulu ngisho nangabantu hatchback ezihlangene. Nalapha futhi, kuyafaneleka ukukhumbula kude lokubolekwa elinganeliseki injini 90 amalitha. a.
Yiqiniso, lokhu idatha esemthethweni, okuyinto, ngaphandle kwabambalwa, kukhona luhluke izibalo zangempela. I-close kakhulu idatha weqiniso ubonisa izibalo okuxubile umjikelezo petrol imoto "Skoda Rapid". Flow kule ukubala buqinisekisa imodeli kahle akha 5.8 amalitha. Njengoba abanikazi, nekhompyutha ibhodi Ungabonisa 6-6.5 amalitha. Futhi nokho inani elivumelekile lapho iqhathaniswa nezinkulungwane abameleli ezinkulu German kanye Japanese kwekilasi.
Vele isikhala ngaphakathi emshinini kusikisela umqondo okuqondene sisonke kuya ezincane izinqola imoto ingxenye. Nokho, uma lesi ngezigaba indlela esiqinile, imodeli bangalindela esiphezulu isimo zenqola ufushanisiwe. Noma kunjalo, umnikazi ithola ingaphakathi ivulekile futhi zisebenza kahle. Kodwa izinzuzo main of izikhumba umthwalo imoto gumbi "Skoda Rapid", izici lobuchwepheshe zazo zimi kanje: umthamo obuncane 530 amalitha, kanye Imininingwane isitoreji umthamo kuze kufinyelele 1470 amalitha.
Lesi sikhala ikuvumela ukuba sizikhandle beka isondo eliyisipele komhlaba, futhi uma Songa izihlalo ezingemuva, evulekile ehlonipheke kakhulu wezimpahla amakhono. Yiqiniso, labantjintja amaningi anika enkulu engaba traffic, kodwa kulokhu, imoto namanje kungokwalabo hatchback nazo zonke izinzuzo zalesi ekilasini ebudlelwaneni futhi adambise zokuphatha.
Imoto emelela izimfanelo engcono we icwecwe European, kodwa ephansi ekupheleni. Kuyaqondakala abasebenzisi, siphawula induduzo, ukusebenza kanye kalula ukulawula imoto "Skoda Rapid" 2015. Izibuyekezo abanikazi mayelana nokusebenza umgwaqo sisonke futhi omuhle. Naphezu ubukhulu yanda, imodeli sisasebenza ngokuya Dynamics futhi ukugembula ezinhle edolobheni. Nokho, kuyinto kubalandeli lokushayela okusheshayo, abashayeli weluleka hhayi tech automatic transmission bubheke "Mechanics".
Ngamanye imigomo Czech hatchback kubi kakhulu. Ikakhulukazi eziningi ezijabulisayo quality Yakha futhi inesikhala esincane yesondlo imoto "Skoda Rapid" abanikazi 2015. Izibuyekezo musa ukuhlukanisa izinkinga ezingathí sina ukugxusha lobuchwepheshe, nakuba ngokuya izinga okudlekayo zisekhona ukugxekwa.
Kusukela amaphutha asobala eziphawula abanikazi elingangena ngokuphepha ngokuthi ukwahlukanisa umsindo kanye nokumisa stiffer. Ngokuvamile, ukusebenza ukwahlukanisa kumele kubhekwe umongo sekugcineni jikelele. Umenzi uye wasebenzisa izinto engabizi, okuyinto kwakha umuzwa umshini isabelomali hhayi kuphela, kodwa futhi kuthinta ukuvikelwa okufanayo kusuka umsindo. Ayikho kancane inkinga, kanye nokumisa emotweni "Skoda Rapid '2015 Izibuyekezo wabanikazi okuyinto uphawu unfriendliness yayo umshayeli nabagibeli. Ngenxa yalokho, kumelwe sikhethe ezindaweni inombolo okungenani imigodi, njenganoma yikuphi ukuzwe esiyitholayo gumbi.
Uma siqhathanisa umfuziselo ngenguqulo okunye YaseYurophu ekilasini efanayo, umehluko kuyoba abalulekile. hatchbacks Compact ezisemadolobheni kusukela global yezimoto umholi umkhakha processability letihloniphekile, ukusebenza ezibanzi, induduzo okusezingeni eliphezulu kanye Ergonomics. Ngenxa yalokhu, i-auto "Skoda Rapid" ongancintisana kuphela ngokuya yokuphatha - ke kwenziwa kahle, edonsela amakhasimende amaningi. Nokho, ezinye izinkomba imodeli is ngokucacile emuva. Futhi lena incazelo, njengoba "Rapid" namanje oluthatha ephansi intengo isixhumanisi yaseYurophu. Ukuze uqhathanise: emakethe yasekhaya le moto angathengwa ruble ayizigidi 700-800 .. Ngakwelinye ihlangothi, abameleli fanekiso ehola brand German kulinganiselwa ruble okungenani esigidini.
Ngingaba uhlanganise emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni? Lokho yokugcwalisa - emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni noma emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni? Kangakanani esikhundleni emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni ku emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni
"Ford Capri" - imoto edume kusuka 70s
Ubuso azenze namaqhubu nezinduna Black Mask: ukubuyekezwa, imfundo, ukwakheka
Umphathi Car Sales. Yini ebaluleke kakhulu: izimfanelo yobuchwepheshe noma eqondene nawe?
Okumangazayo umugqa umshado: ukubhula ngokufunda intende